Bvunza Semalt Expert: Nzira Yokubvisa Referral Spam Kubva kuGoogle Analytics
Kana zvasvika pakutsvaga mazita edzimba kana subdomain akabatwa nekutumira spam kuGoogle Analytics, iwe haungatori mhinduro dzakarurama kusvikira wakagadzirisa zvirongwa zveActa yako. Manyepo kana mafomu anoshanyira acharamba achiuya kubva munhoroondo yeGoogle Analytics zvakare. Ndokusaka iwe uchifanira kuziva uye kuvadzivisa nokukurumidza.
Mumwedzi mishomanana yapfuura, vakawanda vema webmasters nevarume vebhizimisi vakataura pamusoro pekushanyirwa kwenhema uye kutumira spam. Zvinotarisa sokutumira kwaita spam kuri kuitika zuva rose. Nenguva isipi, kune dzimwe nzira dzokubvisa, iyo Max Bell, nyanzvi yepamusoro Semalt , yakatsanangura pasi apa.
Ruramisa yako Google Analytics settings
Nzira yekutanga uye yakanakisisa ndeyokugadzirisa zvirongwa zveGoogle Analytics account. Unofanirwa kuvhura vhesi dzeP IP zvinyongedzere uye uone zvakadzama zvekuti chii chinoshandiswa nemotokari yako. Nokuda kweizvi, unofanirwa kutarisa maGoogle Analytics nheyo yako zuva rimwe nerimwe kana kwevhiki. Kana iwe ukaona kuti deta yako iri kusvibiswa nekutumira spam, zvino ino ndiyo nguva yekuvabvisa kubva kuGoogle Analytics account yako isati yaiswa panzvimbo yako kana yakarambidzwa ne injini dzekutsvaga .
Kuendesa mweya kwepamu uye kudimburira kutumira spam
Kune mhando mbiri dzekutumira spam: mweya kutumira spam uye kukwezva kutumira spam. Ghost referral spam inoreva kushandiswa kweGoogle Analytics pakuratidza kutengesa kwakawanda kwewebsite yako yakagamuchirwa. Havasi vechokwadi uye havana chavanoita nehupenyu hwenyu. Panzvimbo pezvo, vanokupa mazana kubva muzana bounce muzinga sezvo hakuna munhu anoverenga nyaya dzako uye anongotanga kushanyira nzvimbo yako. Migumisiro yavo haisi yakarurama sezvauri kusagamuchira maronda chaiwo..Imwe yenzira dzakanakisisa dzekudzivirira ndeyokudzivirira mawebsite akaita se darodar.com, social-button.com, uye hulfingtonpost.com.
Kuenderera mberi kwepamberi spam ibho rinotarisa webhusaiti yako asi harina kufarira mune zvako kana mapeji ewebhu. Vanotarisira kurongedza nzvimbo yako mune zvinotsvakurudza injini. Kungofanana nehupenyu kutumira spam, iyo yekutsvaga kutsvaga spam inoratidzwa muGoogle Analytics nhau, asi vazhinji vavo havana ngozi. Mienzaniso yakanakisisa ndiyo yakanaka seo solutions.com uye buttonsforwebsite.com. Iwe unogona kubvisa kuburitswa kwekukurumidza kupfurikidza nekudzivirira mazano anopiwa pawebsite idzi.
Unogona kukurumidza kubvisa kutumira spam nekugadzirisa uye kusika zvikamu zvakakwira mubhuku rako reGoogle Analytics. Nokuda kweizvi, unofanira kutanga kutanga kutarisa rudzi rwekushanyira kwauri kugamuchira. Iva nechokwadi chokuti yakarurama, uye kana isiri yechokwadi, iwe unofanirwa kuumba mafaira kuti ubvise. Zvimwewo, unogona kugadzira zvikamu uye sarudza mararamiro kuZvikwidzidzo zvakadzama musati wapedza firiji. Iwe haufaniri kukanganwa kupa mazita akakodzera kune zvikamu zvose kuitira kuti urege kudzivirirwa kupi mune ramangwana.
Zvakakoshawo kuumba zvidimbu zvetsika kuti uwane zvinyorwa kubva kuGoogle Analytics account. Iva nechokwadi chokuti vakabviswa zvachose kubva munzvimbo yekutsvaga spamming kuitira kuti ugone kugadzirisa nyaya yako mumaminitsi. Nekuita izvi, unogona kuderedza kuwedzera kwehuwandu hwenyu uye unogona kuvandudza hutano hwehu webhusaiti yepaiti Source .